Indlela yokunxiba kwisitayile-Ifashoni yamadoda | Amadoda aseStylish
UAlicia tomero | 15/11/2021 21:01 | Ukunyamekela, fashion, Imizila
'Ukunxiba ngokwesitayile' yindlela yokunxiba oko yahlukile ngaphakathi komntu ngamnye. Kuzalwa kubuntu bomntu, kumntu owenzayo ngokwahlukileyo kwaye ngokukodwa, kodwa ngokungenangqondo. Ngokuqinisekileyo uya kuvuma ukuba sonke sinesimbo sethu sokunxiba, enoba silungile okanye asifanele, ekubeni oko kusakha thina ngokwethu. ngobuntu.
Ngaphambi kwendlela yethu yokunxiba kunye nokwenza ngesitayile kukho iingcebiso ezininzi mazinganyamalala ukuba ichanekile. Ithath ababini yenze ngesazela; sebenzisa yonke into onayo, uyila isimbo kwaye usoloko usongeza into ethile.
1 Izixhobo zokugqoka ngesitayela
2 Iindlela zokugqoka kunye nesitayela
3 Nxiba umncinci kwaye unesitayile
3.1 Urban, Surfer okanye Isimbo sokutyibiliza
3.2 Isimbo seBohemian
4 Iinkcukacha zokugqoka ngesitayela
Izixhobo zokugqoka ngesitayela
Zonke iinkcukacha zibalulekile. Ukugqoka akukona nje iimpahla, kodwa ukuba okanye thwala yonke into ehambelana nawe ukuyenza ngesimilo. Inkangeleko yakho nayo ibalulekile: ukuba unenkululeko, uhamba ngokuchanekileyo kwaye uzive ulungile ukunxibelelana, oko iya kuphawula isitayile esihle.
Unxibelelwano olungasebenzisi magama lunokwenza umahluko. Kufuneka coceka, unuke kakuhle, uzinakekele kakuhle iinwele zakho kwaye musani ukunxiba iimpahla ezigugileyo. Nokuba indlela yakho yokuthetha iya kuba yeyona nto iphambili kwiinkcukacha kunye nokufezekisa iinjongo. Ukuba ufuna ukufezekisa zonke ezi nkcukacha ayisiyonto yokwenza ngaphandle kokungaphezulu, kodwa zive ngokuqonda.
Ngaba ukunxiba ngokwesitayile kuyindoda elungileyo okanye ukunxiba kakuhle? Ngokunyaniseka, kunokuba ngumkhwa wokudala le modyuli. Ukuba nobuhle yindlela yokunxiba, leyo kuphawula ubuntu bomntu, kwaye inokubandakanywa njengendlela yokugqoka ngokungaqhelekanga. Ukuba yindoda ehloniphekileyo yinxalenye yendlela yokuziphatha kunye nokunxiba kakuhle, kodwa ukwakha ixabiso lomntu ngamnye. Singayibandakanya kwakhona njengomntu onesitayile, kodwa asiyondlela yabo yokusichaza.
Iindlela zokugqoka kunye nesitayela
Indlela yokugqoka ngesitayela ichazwa ngendlela ye bonakalisa ubuntu bomntu ngamnye. Umntu ngamnye unomfanekiso wakhe wobuqu, ukuba wenza ngawo iingcambu ezinkulu kunye nokudala umtsalane. Izitayile zokugqoka zinokuqala ukusuka kwezona dolophu ukuya kwezona zibalaseleyo okanye zezemidlalo. Kukho izimbo zemveli ezifana neRock, iPunk, iHippie, iGothic ezona zigqithileyo kodwa ezinokwenziwa ngobuntu. Okanye iCowboy, Sport, Urban, Hip Hop okanye Classic-elegant style. Yeyiphi eyona inxulumene kakhulu nobuntu bakho?
Nxiba umncinci kwaye unesitayile
Olu hlobo lomkhuba Kudalwe ukuba kunxitywe kubantu abatsha. Ukwenza ngesitayela kubalulekile ukwazi ukuba kufuneka kube ngokweminyaka. Ukwazi indlela yokunxiba kakuhle unokufunda enye ye amanqaku ethu apho sikubonisa khona ukuba kufuneka ulungise njani ezo mpazamo zincinci xa uthenga iimpahla ozifunayo.
Urban, Surfer okanye Isimbo sokutyibiliza
Ngokuyintloko zezona zimbo zisetyenziswa kakhulu ebutsheni. Isitayela sasezidolophini sihlanganiswe kwezo mpahla ezithandayo ukudibanisa nezo zihlandlo kwisitalato kunye ngamaxesha athile. Ukudala olu lungelelwaniso, akufuneki wenze uphando oluninzi, kodwa siqinisekile ukuba abantu abatsha bayayithanda ngakumbi nangakumbi. ukulula kweengubo.
El isitayile se skater ebesoloko ephawula indlela yakhe yokunxiba ibhulukhwe ebhegi, ihempe ezibanzi nezinde, kwaye nangona isenokungabonakali ngathi, iqale apho. Kwii-70s'. Le ndlela yokunxiba nayo ibandakanyiwe njengendlela yokunxiba yasezidolophini nalapho isitayile segrunge kunye nehipster sikwahamba nayo.
El isimbo sokusefa Ikwangomnye wabo batsala kakhulu ngokuchitha iimpahla zayo ngesitayile, yenza ubutsha kunye nobuqili obuninzi ngexesha lokunxiba. Siyazithanda ezo manes zikrwada, ziqaqambile kunye nalaa ndlela yaseHawaii yokunxiba iimpahla. Yenye indlela yokudala umkhwa, ngakumbi kwiidolophu ezikufutshane nolwandle.
Ihlala idala umkhwa, kuba iimpahla zayo zihlala ubomi obuzolileyo kunye nokuphumla. Ibonisa imihlobiso engaqhelekanga, imibala engaqhelekanga, kunye evela kuhlanga okanye kwihippie. Kufanelekile ukunxiba yonke imihla, nangona abaninzi bekhetha ukuyifaka kwiihambo zabo zempelaveki.
Iinkcukacha zokugqoka ngesitayela
Sihlalutya iingcebiso ezincinci eziza kukunceda wenze isitayela sakho ngobuntu. Kufuneka hlalutya umzimba wakho ukwazi ukuba luhlobo luni lweempahla oluya kufanelana nawe, njengesincomo kungcono khetha iimpahla kwaye uzame zona ngokwakho. Zama ukwenza iprojekthi yesimbo esifana nayo kwindlela yakho yokuphila kunye nokwenza, awukwazi ukusebenza kakhulu kwaye uthanda i-bohemian.
Cinga nge thenga iimpahla ezilula, kodwa oko kuphawula into eyahlukileyo, kwaye ingasetyenziswa iminyaka eliqela. Uhlala kufuneka unakekele iimpahla zakho kunye leyo ayibonakali igugile kakhulu. Xa kuziwa ekudibaniseni iimpahla, kufuneka wenze ukhetho ngokunambitha. Izixhobo zibaluleke kakhulu, ngoko ke kufuneka zibe ngoku kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Indlela yokugqoka kwisitayela